nasongadina: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Desambra 2019	• 11 Comments
Mitondra vaovao be dia be izahay amin'ny Internet ka niova avy amin'ny loharanom-pahalalana mba hahatsapan'ny tafondro tsara. Tahaka ny niodinan'ny fahitalavitra avy amin'ny fampahalalam-baovao mankany amin'ny fialam-boly divay sy ny chip, notontosain'i John de Mol & co; Ohatra, amin'izao fotoana izao ny haino aman-jery sosialy dia momba ny horonantsary mahafinaritra sy mampihomehy ary mijery ny ataon'ny namanao ao amin'ny Instagram. Ho fanampin'izany […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 Desambra 2019	• 9 Comments
Ny tontolon'ny tontolo ara-teknolojia iray no vahaolana tokana hamonjy ny planeta antsika amin'ny fahasimbana vokatry ny lozam-pifamoivoizana mankany amin'ny antsika. Rehefa mandefa ny lakolosy fanairana ny kintan'ny sarimihetsika dia efa naharesy lahatra ny antsasaky ny mponina eran-tany ianao fa misy zavatra tena tokony hatao, satria ny fahitana tsara sy ny fitsaohana ny mpankafy no fototry izany. [...]
Rutger Bregman dia mitaky ny fitondrana FISista iray manaitra
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 Desambra 2019	• 8 Comments
Rutger Bregman, mpanoratra fanta-daza amin'izao tontolo izao, noho ny lahateniny tamin'ny World Economic Forum, dia nanao fanambarana mahavariana tamin'ny resadresaka nifanaovana tato ho ato. Matetika rehefa misy olona maka saina be dia be, dia mifanerasera amin'ny olona manosika ny fandaharam-potoana ho ao ambadiky ny saron'ilay mpitsikera mahatsikaiky isika. Hitantsika fa ao amin'ny Greta Thunberg dia hitantsika fa […]
Ny fampiroboroboana Sinterklaas lehibe: mahagaga gaga tsara tarehy!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 Novambra 2019	• 10 Comments
Saika Sinterklaas, fety amin'ny tena ankizy ary fety tsy ampoizina mihitsy. Ireo zava-tsy ampoizina dia nofonosina tsara tarehy ary matetika dia manome vola tsara isika. Amin'ny toe-javatra misy ny zanatsika, te-handoa izany izahay, fa ny zava-tsy ampoizina amin'ny fanjakana Sinterklaas dia toy ny fonosana tsara amin'ny vatam-paty tsara tarehy ary lafo aminay […]
Ny fakantsary Smart amin'ny kianja filalaovana baolina kitra dia mialoha ny fiaraha-monina rafitra shinoa?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 Novambra 2019	• 10 Comments
Any Chine dia misy rafitra ara-tsosialy, antsoina hoe Sesame Credit, izay mihazakazaka, izay ahitàna ny fihetsik'ireo olom-pirenena tsirairay ao anaty isa na teboka kely. Amin'ny teboka somary ambany kokoa, ohatra, dia tsy mahazo mandeha amin'ny lamasinina na fiaramanidina intsony ianao na miafara amin'ny filaharana ho an'ny paikady fampiharana. Ny rafitra teboka toy izany ihany koa dia ho tanterahana ao anatin'ny vondrona EU […]
Ny AIVD dia nanakana indray ny fanafihan'ny mpampihorohoro, hoy ny AIVD ary ny haino aman-jery dia mivarotra ilay seho
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 Novambra 2019	• 10 Comments
Raha ny tena marina, tsy betsaka intsony ny mila milaza izany momba ny tena noho ny lohateny efa mamintina. Ny AIVD dia nanakana ny fanafihana iray hafa, hoy ny AIVD ary ny haino aman-jery no mivarotra ilay seho. Ny vaovaon'ny NOS dia tsy dia voahazona tamina foto-kevitra am-polony, fa ny studio mijery lafo sy lafo vidy kokoa […]
Ny kapitalisma sy ny demokrasia mahamenatra, ny lalana miadana amin'ny fascismista
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 Novambra 2019	• 19 Comments
Raha mamaky ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ianao dia mety manahy sy manontany tena hoe inona ilay hevitra ao ambadik'izany!? Raha nandinika tsara ianao tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay dia nahitanareo zavatra roa lehibe. Hitanay hatrany ireo orinasa na indostria lasa banky ary entin'ny firenena […]
Maninona i Trump dia tsy anti-globalista fa trano aristokrasia hafa
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Novambra 2019	• 9 Comments
Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona ireo mpanao politika amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana dia mitaky zavatra maro foana no manipy azy rehefa voafidy? Any Holandy (sy ny demokrasia hafa izay misy rafitra marobe isan-karazany) dia afaka manafina ao ambadiky ny fitsikerana ny ilàna marimaritra iraisana amin'ny firaisankina ny fiaraha-miasa. Efa nisy […]
Ny dadaben'ny raibe Greta Thunberg dia lasa mpamorona ny fiantraikany eny an-trano sy ny fampihenan'ny mponina amin'ny alàlan'ny eugenika
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Novambra 2019	• 8 Comments
Raha misy olona mahazo tampoka be dia be sy be kintana eo amin'ny sehatra erak'izao tontolo izao, matetika dia tsy kisendrasendra. Raha ny toe-piainan'i Suède sy ilay mpikatroka tontolo iainana Greta Thunberg, dia toa ny fikasana tsara no nialoha izany. Ny reniny, Malena Ernman, dia nahazo ny famaranana farany tamin'ny 2009 noho ny fandraisana anjara holandey tao amin'ny Eurovision […]
Mampiseho ny UN manifesto '90: ny fepetra momba ny toetrandro noforonina hampihatra ny governemanta manerantany
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Novambra 2019	• 5 Comments
Ao amin'ny 90, Sekretera jeneralin'ny ONU, Robert Muller, dia namoaka fanambarana iray milaza fa tokony hisy ny governemanta eran-tany. Izany fitantanana manerantany dia tsy maintsy tanterahina amin'ny alàlan'ny fiheverana ny "miaro ny tany" miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny tontolo iainana ho singa manan-danja indrindra. Io manifesto io dia manazava ny fomba ahafahan'ny besinimaro resy lahatra […]
Total visits: 14.426.212
Willem S op Tandindonin-kafanam-po: Ny sainam-pirenena tsy mitsaha-mitombo amin'ny famonoana vola
Camera 2 op Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoana UNN 2030
Martin Vrijland op Ny fampiroboroboana Sinterklaas lehibe: mahagaga gaga tsara tarehy!
Martin Vrijland op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany